🥇 ▷ Dib u eegista UMIDIGI A5 Pro, qurux badan oo suurta gal ah ✅
Dib u eegista UMIDIGI A5 Pro, qurux badan oo suurta gal ah
Dib u eegista UMIDIGI A5 Pro – In kasta oo dhamaadka dhexe ee hoose ee suuqa uu ka badan yahay weligiis, soo-saareyaashu waxay u helaan meel ay ku helaan soo-jeedinno cusub, kuwaas oo si tartiib tartiib ah kor ugu qaadaya heerka celceliska badeecadaha, Thanks to kamaradaha wanaagsan, muuqaalka nadaafadda iyo barnaamijyada cusboonaysiinta.
Arintaani waa tan UMIDIGI A5 Pro, taleefanka casriga ah oo si sahal ah u galikaro laakiin aan helno wado uu kaga baxo, Thanks to qaar ka mid ah xulashooyinka farsamada iyo qaab dhismeedka taas oo si gaar ah u soo jiidatay kooxda isticmaaleyaasha ee aan awoodin ama aan dooneynin inay wax badan ku bixiyaan. wax badan oo hal casriga ah, oo aan allabaryo badan lahayn.
Naqshadeynta & Ergonomikiska
Waxaan isku daynay midabaynta Neefta ee Crystal, oo ah waxa ugu xiisaha badan ee labada (tan kale waa midab madow oo aan lagaranaynin). UMIDIGI waxay qabatay shaqo aad u wanaagsan iyadoo la adeegsanayo ciyaarta iftiinka, sameynta dabool dhabarka ah oo si joogto ah u beddelaya midabka, abuurista cayaaraha runtii aad u qurux badan.
Ka muuqda kor, iyo xagal gaar ah, daboolku wuxuu u ekaa mid cad laakiin way ku filan tahay inaad u dhaqaaqdo si dhakhso leh u aragto hooska midabada midabkiisu yahay buluug ilaa buluug ah, oo sifiican loo jebiyey. Dusha sare si muuqata ayey u xajineysaa faraha iyo xalka waxay noqon kartaa isticmaalka daboolka caagga ah ee xirmada iibka. Waa wax laga xumaado, si kastaba ha noqotee, inaan luminno ciyaarista iftiinka, sidaa darteed waa inaad uga tagtaa halka ay ku taal oo aad la qabato faraha farahaaga qaarkood, kuwaas oo si dhaqso ah loo nadiifiyo xitaa shaatiga.
In kasta oo aan miisaankiisu aad u hooseyn, 203 garaam, UMIDIGI A5 Pro si fiican ayaa gacanta loogu hayaa, iyada oo laga mahadcelinayo in aan si gaar ah loo buunbuunin cabbirrada (156 x 75.9 x 8.2 mm) iyada oo la tixgelinayo jiritaanka shaashadda 6.3 inji LTPS, oo leh xallinta FullHD +. Meelaha taban, xitaa kan hoose, gaar ahaan tixgelinta qiimaha. Qeybta kore ee shaashadda waxaa ku yaallo dhibic dareere ah, oo ka kooban kamaradda hore.
Isla markiiba korkeeda waa la arki karaa grid-yar oo kaabsoosaarka dhegta la dhigo. Aad ayey uga xun tahay maqnaanshaha LED-ka ogeysiinta, oo runtii ku habboonaan lahayd. Waxay tilmaami kartaa jiritaanka, gunta hoose, ee santuuqa 3.5mm ee qalabka dhegaha la gashto, oo ku xigta isku xirka dib u buuxinta. Nasiib darrose, UMIDIGI waxay ku dhacday microUSB, oo ah xulasho u muuqata mid sii kordheysa oo ku soo korortay 2019.
Gaar ahaan doorka doorashada ee ku xirnaa kamaradda gadaal, iyadoo laba walxood ay meeleeyaan qol-goon iyo aaladda saddexaad ee gooni-u-goosadka ah, oo leh Flash Flash ay ku xirto kooxda. Dhinaca midig ee tooshka waxaan ka helnaa akhristaha faraha, oo u taagan midabkiisu buluug khafiif ah, oo si muuqata loo arki karo xitaa marka dhabarka dambe uu u muuqdo caddaan.
Xitaa UMIDIGI A5 Pro waxay bixisaa suurtagalnimada xakamaynta taleefanka casriga ah ee dhaqdhaqaaqyada, xitaa haddii xalka la doortay uusan aheyn kan ugu fiican, iyadoo swipes-ka dhammaantood lagu sameyn doono qaybta hoose ee bandhigga iyo dhammaanba kore: xarunta si loogu soo celiyo Guri, bidix inaad ku laabato iyo midigta si aad uhesho waxyaabo badan. Waad u rogi kartaa labadan mid ee ugu dambeysay, ama waad dhaqaajin kartaa barta badhanka dhaqameed ee badan.
Waxaa jira siidayn leh wejiga, kaas oo lagu dhaqaaqo adigoo riixaya badhanka / furitaanka. Sidaa darteed otomatiga wareejinta shaashadda ayaa ka maqan adiga oo kor u qaadaya taleefanka casriga ah, iyo sidoo kale suurtagalnimada in lagu dami karo laba laab. Faahfaahin, si kastaba ha noqotee, cawaaqib yar Inta soo hartay waxaan helnaa Android 9 Pie oo ah nooca saamiyada, oo leh barnaamijyada Google oo aan lahayn dalab caadadiisu tahay.
Muuqaalka MediaTek Helio P23, oo leh 2 GHZ core octa CPU iyo MAli-G71 MP2 GPU, ayaa shaqadeeda si wanaagsan u qabata, taasoo ka dhigaysa in interface si habsami leh u socdo. Dib-u-dhac gaar ah ee furitaanka dalabyadu waa mid la fahmi karo, xitaa kuwa wali ku sii jiri kara xusuusta, laakiin wax aan qof ku wada noolaan karin. 4 GB ee RAM, oo ay taageerayaan 32 GB oo ah xusuusta gudaha, ayaa ku filan inay dammaanad qaadaan khibrad raaxo leh oo adeegsiga. Waa in la ogaadaa in Gaariga SIM-ka uu sidoo kale leeyahay god gooni ah oo microSD ah, marka waxaa suurtagal ah in la isticmaalo laba kaar oo SIM ah iyo kaarka xusuusta oo dheeraad ah.
Ha ka fikirin inaad ku rakibto khaas ahaan ciyaar adag ama culeys culus oo ku saabsan CPU, laakiin qaar ka mid ah cayaaraha caadiga ah ayaan dhab ahaantii khaldami doonin Iftiimin shaashad wanaagsan, oo leh xagal daawasho aad u wanaagsan, oo aad u saxsan akhristaha faraha, xitaa taabasho aad u dhaqso badan, laakiin shaashaddu waxay daah furaysaa dib u dhac yar.
Muuqaalka codka fiican, wuxuu ku yaal salka hoose ee jirkiisa, xitaa haddii baaruhu gabi ahaanba ka maqan yahay meesha sarena aad ayay u yar yihiin. Waxaa xusid mudan in joogitaanka Wi-Fi ee 5 GHz iyo taageerada band 20 ee shabakadaha LTE. Qaadashada GPS / GLONASS ee wanaagsan, taas oo aan waligeed naga siin wax dhibaato ah oo isu muujinaya inay si dhakhso leh ugu filan tahay ogaanshaha booska.
UMIDIGI A5 Pro Sidaa darteed waa la isku halleyn karaa kamarad gadaal saddex-gees ah, oo leh qalabka ugu weyn ee Sony IMX398 (xaaladaha qaarkood waxaa jiri kara Samsung S5K2P7) oo leh focal dherer f / 1.8 iyo lix-lens system, dareeme sare oo heer sare ah (120 digrii) 8 megapixel iyo shay saddexaad oo 5-megapixel ah oo loogu talagalay xisaabinta qoto dheer ee duurka. Dhanka hore waxaan ka helnaa 5 megapixel sensor, oo leh f / 2.0 aperture oo leh shaqooyin aqoonsi (aan amaan aheyn) ee wajiga.
Sawirada ayaa isu rogay si la yaab leh oo leh iftiin badan, oo leh midabo isku dheelitiran oo macquul ah. Saamaynta dhinaca-ballaadhan ayaa sidoo kale si muuqata loo arki karaa, taas oo u oggolaaneysa inay qabato panoramas aad u ballaaran ama kooxo dad aad u tiro badan. Xaaladaha iftiinka ee liita waxyaabaha sida muuqata si isku mid ah iskugu beddelaan, laakiin waa dhibaato si kastaba ha noqotee qiimehan, oo ay adag tahay in wax laga waydiiyo oo wax badan laga dalbado.
Ma aha mid aad waxtar u leh waa zoomka dhijitaalka ah ee isla markiiba ku dhawaaqaya sawirrada, halka saamaynta bokeh ay tahay in hubaal la hagaajiyo. Waxay ku dhacdaa xaqiiqada ah in maadada asalka ah aan si fiican loo sawirin, xaaladdu waxay si muuqata uga muuqanaysaa sawirka hoose, oo ay ku taal sanduuqa asalka oo u muuqda safka hore.
Waan arki doonnaa haddii UMIDIGI ay ku wanaajin doonto tan iyada oo leh casriyeyn soo socota. Celcelis ahaan, xitaa kamaradda hore, is-miidaaminta maalinta, aasaas ahaan aan macquul ahayn fiidkii. Laakiin xitaa tani waxay ku jirtaa dhexda.
Batteriga & Madax-bannaanida
Iyada oo ay ku jirto batterigeeda 4,150 mAh UMIDIGI A5 Pro waa mid ka mid ah awoodaha taleefanka casriga ah ee aadka u miisaaman. Ma ahan wax adag in la gaaro labada maalmood ee la istcimaalay, iyo xitaa in si xoog leh loo isticmaalo daawashada filimada iyo ciyaarta way adkeyd in la sii daayo batteriga, taas oo had iyo jeer noo oggolaatay inaan gaarno fiidkii, celcelis ahaan ugu yaraan 6-7 saacadood ee shaashadda.
Kacsi qaadistu waxay dhacaysaa 10 watts, markaa waxay ku qaadataa laba saacadood qaadashada oo dhan.
UMIDIGI A5 Pro waa terminal wanaagsan, gaar ahaan qiimaha oo ka dhigaya mid aad u soo jiidasho leh sida forklift ama taleefanka gacanta ee kuwa aan sheegasho gaar ah lahayn. Waxaad ka iibsan kartaa UMIDIGI A5 Pro Amazon-ka oo ah 119,00 euro.